Gadzira Nzira neGoogle Earth | Martech Zone
Mugovera, March 17, 2007 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Douglas Karr
The Indianapolis Tsika Yetsika ndiyo Nhaka yeGene & Marilyn Glick. Iyo yeCultural trail ndeye yepasirese-bhasikoro remaguta bhasikoro uye nzira yekufamba-famba inobatanidza nharaunda, Nzvimbo dzeMagariro uye zvinokuvaraidza, uye inoshanda senzvimbo yedhorobha yepakati pese pakati peIndiana greenway system. Icho chirongwa chinonakidza chiri kutanga kutora midzi pano.
Mukutaura naPat Coyle, ndakafunga kuti zvingave zvakanaka kupora iyo Tsika Nzira uye kuiisa paGoogle Mepu kuti vanhu vagone kupindirana Google Earth (Unogona kuitora mahara) kana kuiona paWebhu Saiti.
Kuvaka nzira yeGoogle Mepu kwaigona kunge kuchityisa, asi neGoogle Earth zviri nyore. Unogona kushandisa Path chishandiso
kugadzira nzira. Dzvanya nzira yekushandisa uye tinya panotangira nzira yako. Mutsara unodhonzwa. Dzvanya yega yega mushure inoburitsa yepakati-poindi. Inogona kuve yerudzi rwekunyengera (ctrl-tinya inobvisa poindi), asi iwe unogona kukurumidza kuburitsa nzira pamepu. Kana iwe ukanyatso-tora pakukora kwako mubato repadivi, iwe unogona kuwedzera tsananguro, chinja kutaridzika uye kunzwa kwenzvimbo yako, uye kunyange kuseta kukwirira.
NeGoogle Earth, iwe unogona zvakare kudzora iyo mamiriro uye wochinja toni yemamwe maratidziro uye kudzima. Iyo yepamusoro-kurudyi seti yemidziyo inokutendera iwe kuti uswededze, kurereka, shandura maonero ako, tenderera, uye shandura kukwira. Iko kushandiswa kwechishandiso kuri intuitive kwazvo!
Muna Zvita, Google Mepu yakawedzera rutsigiro rweKML kuAPI yavo, saka unogona nyore buritsa zvidimbu zvako seKML faira uye unongedze nazvo neGoogle Mepu.
Zvakare, iwe unogona kunyora uye kurodha ako maturu kune vanhu kuti vazviwane. Ini handisati ndazviita izvozvi, asi ndichave munguva pfupi! Chikamu chekutanga chechirongwa ichi chaive chekugadzira nzira. Imwe nzira yekuchengetera - ndakavhura mufananidzo weCultural Trail ndikautumira kuGoogle Earth. Ndakaiisa kungangoita makumi matatu muzana kujeka uye ndaiishandisa segaji yekumhanyisa nzira yacho nekukurumidza.
Chikamu chinotevera cheprojekti ichi chichava ichivaka mepu inowirirana ine mbeva pamapoinzi uye popup yemifananidzo. Zvakanaka zvinhu!
Ichokwadi here "Uchenjeri hweVazhinji"?
Mar 19, 2007 pa 1: 23 PM
Iyi tekinoroji inoshamisa zvechokwadi. Mapquest haisati yatanga kuisa satellite pamusoro pemamepu.
Iva nenguva yekutsvagisa nguva kuti uone kana tichigona kushandisa izvi mukati mekudzidzira maitiro ehurongwa. Zvingave zvakanaka kuve nematanho emigwagwa kune vatengi kune vedu vanopa mazano.
Mar 19, 2007 pa 2: 14 PM
Mafambiro ndeaya achangoburwa eGoogle Mepu API saka inogona kushandiswa kugadzira faira rekunze rinowanikwa kuburikidza neGoogle Earth. Nzira yekugadzirisa (2+ poindi) idiki yakaoma kuenzanisa. Kune vamwe vatengesi kunze uko vanozviita nemazvo Chava asi ini handina kuona chero API kana Software seSevhisi yekumisikidza.
Ndine chokwadi chekuti iri kukona kumwe kunhu! 🙂
Ndinobvuma - zvinoshamisa!
Mar 31, 2007 pa 8: 16 AM
Doug, Izvo zvakanaka. Kutenda nekugovana! Handina kumbogara pasi kuti ndione zvinhu izvi kunze, asi zvinoita sekunge mikana yacho haina magumo. Kumwe kushandiswa kwandinogona kuona ipapo kuti kwaizotengesa kuisa emepu dzegoogle netsika dzakafukidzwa mukati chaimo mawebhusaiti evatengi.
Mar 31, 2007 pa 8: 27 AM
Chaizvoizvo, Ian! Ndichiri kunakidzwa nemepu iyi. Ini ndinogona kuwedzera kutsvaga, kuisa 'yekuzvishandira-yega' mamaki system kumusoro, kuwedzera nzira, uye kuburitsa zvimwe zvinhu. Buda Kero Kugadzirisa kune mumwe muenzaniso. Ndinovimba kuve neinopindirana mepu saiti yakagadzirirwa vhiki ino.
BTW: Inonakidza saiti uye tarisira kusangana newe. Tine 'yakasununguka' netiweki yehunyanzvi pano muIndy iyo yatinoshanda nayo kubatsira toni yevatengi. Isu tingangoda kuti iwe upinde mumusanganiswa!
Mar 31, 2007 pa 10: 52 AM
Ndakaona nezvako Thru Ade, shamwari yangu. Zvakanaka kusangana nevamwe vakaita seni.
Rimwe zuva ini ndanga ndichitarisa GMap EZ, rakapusa nyore kudonha-script kuti ndiise Google MAP API muwebhu rewebhu: http://www.n-vent.com/googlemaptest
Izvo zvakanaka zvinotonhorera zvinhu.
May 31, 2009 pa 5: 52 AM
Nehurombo Google Earth iri kushaya chimiro: kana iwe ukagadzira nzira, hapana imwe nzira yakapusa yekuyera kureba kwayo.
Neraki, ini ndakagadzirisa dambudziko iri! Kana iwe ukachengetedza nzira se .kmz faira iwe unogona kuiisa kune yangu webhusaiti uye inokuudza iwe kureba kwenzira. Hechino chinongedzo:
Jun 4, 2009 pa 4: 59 PM
Ndakaona kuti yangu yekuodha script yakatyoka, asi ndakaigadzirisa. Ini ndakaigadzirawo kuti iwe ugone kuisa upload .kmz nzira mafaera kana .kml nzira mafaera. Saka zvekare, heino chinongedzo chekuwana hurefu hwenzira yako yeGoogle Earth: